प्रकाश सुवेदी । नेपाली सिने क्षेत्रबारे जानकारी राख्नेका लागि पुरानो नाम हो यो । रजतपट कार्यक्रम जहिले जहिले जुन जुन टिभीमा प्रसारण भए, त्यसले राम्रै स्याबासी पाए ।
हो, यही कार्यक्रमका प्रस्तोता हुन् प्रकाश सुवेदी ।
सुवेदी योबीचमा केही समय हराए । सानो पर्दाबाट हराएका उनी फेरि नयाँ स्वरुपमा रजतपट कार्यक्रमबाटै केही साता यता टिभीमा देखिन थालेका छन् ।
र, यसपटक पनि उनले कार्यक्रमबाट ‘हंगामा’ मच्चाइरहेका छन् ।
त्यो हंगामाको सुरुवात केही दिनअघि राजेश हमाललाई दीपाश्री निरौलाले महानायक नमान्ने विषयबाट सुरु भएको थियो । दीपश्रीले प्रकाशकै कार्यक्रममा भनेकी थिइन्– हमाललाई महानायक बनाइदिएको दाइले नै त हो ।
गमक्क परेका थिए, प्रकाश त्यति बेला ।
तिनै प्रकाश अब फेरि एकपटक सामाजिक सन्जालमा छाएका छन् । र, यो पनि उनकै कार्यक्रम रजतपटको एउटा प्रसंगका कारण ।
पहिले यसको थोरै ब्याकग्राउन्डमा जाऔँ । प्रकाशले केही समयअघि अभिनेत्री पूजा शर्मालाई आफ्नो कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । त्यही कार्यक्रममा पूजा शर्माले नेपालबारे सोधिएका सामान्य प्रश्नमा जे जवाफ दिएकी थिइन्, त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो, सामाजिक सन्जालमा । त्यो अन्तर्वार्ताबाट थाहा हुन्थ्यो, पूजालाई नेपालमा कति जिल्ला र कति प्रदेश छन् भन्ने पनि सामान्य जानकारी त्यति बेला रहेनछ ।
सामाजिक सन्जालमा व्यापक चर्चा भएको यो विषय केही समयका लागि ओझेलमा परेको थियो जब प्रकाशकै कार्यक्रममा दीपाश्रीले कन्ट्रोभर्सिल स्टेटमेन्ट दिएकी थिइन् ।
तर, पछिल्लो समय फेरि अभिनेत्री पूजा शर्मा एउटा युट्युब अन्तर्वार्तामा देखा परिन् । त्यसमा उनले खुलेर प्रकाश सुवेदीसँगको अन्तर्वार्ताबारे कुरा गरेकी छिन् ।
रमाइलो छ नामको युट्युब च्यानलमा पूजाले स्पष्ट भनेकी छिन्, त्यो मेरो गल्ती थियो तर त्यसले अरुलाई सचेत चाहिँ बनाएको छ नि । अनि उनले त्यो कार्यक्रमबाट विवादास्पद कुरा काटिदिन पनि प्रकाशलाई अनुरोध गरेकी रहिछिन् ।
यही विषयमा फेरि एकपटक प्रकाश सुवेदी प्रवेश गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रसारित उनको कार्यक्रम रजतपटमा उनले फेरि यो विषयमा मुख खोलेका छन् । अनि त्यसमा उनले अहिलेसम्म कलाकारहरुलाई आफूले कसरी हेर्दै आएका छन्, कलाकारमाथि आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण के हो भन्ने खुलस्त पारेका छन् ।
यसमा प्रकाशले सुरु गरेका छन्, एक बलिउड अभिनेत्रीको प्रसंगबाट । उनले आफैं भनेका छन्, ‘नाम नलिउँ ।’ अनि ती अभिनेत्रीले चर्चा हुँदा उनलाई फलो गर्नेहरु भएको तर केही समयपछि उनले आफ्नो अन्तर्वार्ता आफैंले गर्नु पर्ने बाध्यतामा पुगेको प्रकाशको उदाहरण छ ।
अब उनी फर्किए नेपाली अभिनेत्रीतिर । उनले कार्यक्रममा नाम त लिएका छैनन्, तर उनले जे भनेका छन्, त्यसबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ, उनको यो अभिव्यक्ति हो, पूजा शर्माबारे ।
प्रकाशको अभिव्यक्तिमा सुरुमै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ । उनले आफूलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन्, मानौँ उनले नै नेपाली फिल्मी दुनियाँमा अभिनेत्रीहरुलाई टिकाइदिएका हुन् । चार पुस्ताका अभिनेत्रीको उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्– यही खप्परमा पाँचौ पुस्ताको पनि अन्तर्वार्ता लिन लेखिएको होला ।
यो दम्भ उनले यसरी देखाएका छन्, मानौँ नेपाली कलाकार पत्रकारले देखाइदिएको सहिष्णुता र दया तथा प्रेमका कारण अहिले पनि काममा लागिरहेका छन् । उनले यसरी भनेका छन्, मानौँ उनले नै नेपाली अभिनेत्रीलाई अहिले फिल्मी दुनियाँमा टिकाउने वा नटिकाउने जिम्मेवारी लिएका छन् ।
सुरुमै यसमा गलत किन छ भने प्रकाशले भुल्नु हुँदैन, कुनै पनि कलाकार पत्रकारका कारण चर्चामा आउने वा आफ्नो दुनियाँमा टिकिरहने होइन । पत्रकारले उचालेकै भरमा वा हात समातेर नदी तारिदिन खोजेकै भ्रममा कोही व्यक्तिको अभिनय, कला, आचरण राम्रो छैन भने ऊ माथि आउनै सक्दैन ।
फेरि प्रकाशले भुल्नु हुँदैनथ्यो, उनले भनेजस्तो उनलाई अन्तर्वार्ता लिइदिनुहोस् भन्दै कोही आउँछ भने उनले गर्व गर्ने त एक ठाउँमा होला, उनको पेशाको प्रयोग गर्न चाहिँ होइन । पूजा शर्माले अब आफूलाई अन्तर्वार्ता नै दिन्नँ भन्ने सुनेपछि सायद प्रकाशले बिर्सिएका छन्– फलेको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?
हो, नेपाली सिने क्षेत्र र सिने पत्रकारितामा केही उदाहरणहरु नभएका होइनन् जसले यो क्षेत्रलाई नै बारम्बार ठूलो समस्यामा पारेको छ । सिने पत्रकारिताको हुर्मत लिएका उदाहरण पनि केही नभएका होइनन् । तर, हिजोदेखि यही क्षेत्रमा रहेका प्रकाश सुवेदीबाट पनि के यो क्षेत्रले, यो समाजले त्यही अपेक्षा गरेको हो ?
के प्रकाश आफू यसमा जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? कि उनलाई लागिरहेको छ यो क्षेत्रमा उनले जे भने पनि हुन्छ ? कि उनी आफ्नो ‘कमन सेन्स’ पनि प्रयोग नगर्ने र अरुले लेखिदिएको स्क्रिप्ट मात्र पढ्न टिभीको पर्दामा उभिन्छन् ?
यो एउटा प्रसंग भयो ।
अब लागौँ, प्रकाशले यही कार्यक्रममा टिप्पणी गरेको अर्को प्रसंगमा ।
अभिनेत्रीको सौन्दर्यको चर्चा गर्न प्रकाशले त्यहाँ प्रयोग गरेका छन्, एउटा वाक्यांश । “इन्टरभ्यु दिने पनि आफैँ, बोल्ने पनि आफैँ, नआउने पनि आफैँलाई । अनि हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू काटेर मिलाई दिनुपर्ने । महानायिका बनाइदिनुपर्ने । त्यो पनि दाह्रा निस्केको अनुहारलाई, कति हाँस्नु ।’
यति लामो समय पत्रकारिता गरेका र पत्रकारितामा आफूलाई दिग्गज मान्ने प्रकाशले के मानिसको रुपरेखा र अनुहारको बनावटलाई सौन्दर्यसँग दाँज्न हुन्छ ? के उनले सिकेको यही हो ?
कि प्रकाश सुवेदीले अब बोल्दा के बोल्दैछु भन्ने हेक्का नहुने भएकाले आफ्नो मुखमा लगाम लगाउनु पर्ने बेला आएको हो ?
प्रकाश सुवेदीले गरेको टिप्पणीलाई पत्रकार स्वेच्छा राउतले आफ्नो ट्विटरमा राखेकी छिन् । हेर्नुस् भिडियोः
५ वटा फरक पुस्ताका अभिनेत्रीहरूको अन्तर्वाता लिने भाग्य आफ्नो खप्परमा लेखिनुको घमण्ड रहेछ। हामी चाहिं यस्तै प्रवृत्ती देखेर फिल्म पत्रकारिताबाट भाग्नु परेको छ।
हटाउनु भनेको भाग प्रसारण गररे नाक फूलाएका उनले यो पटक आफैलाई नङ्ग्याएछन्। ठीकै छ तर कसैमाथिको अपमानजनक टिप्पणी सह्य छैन pic.twitter.com/hQTTNMUfkC
— स्वेच्छा (@rSwechchha) August 8, 2020
प्रकाशित मिति : साउन २४, २०७७ शनिबार १९:३९:२४,